Alahadin’ny Sekoly 2020. – FJKM
MIHAVANA AO AMIN’NY TOMPO
1-Hira faneva faha-200 Taonan’ny Sekoly FJKM
Ho amin’ny fanahinao anie ny fahasoavan’i Jesoa Kristy Tompo (Fil 4.23)
Vakiteny : Lev 19.16-18/ Mar 9.33-50/ Fil 2.1-4
5-Vavaka setrin’ny Tenin’Andriamanitra sy Fifonana
Teny famelankeloka : Jak 4.9-10
sambatra ny olona izay voavela ny helony … ( Sal 32.1,2)
Hira HF 26.1-2
9-Vavaka fangatahana (ny FJKM , ny Sekoly, ny asa fanabeazana ataon’ny fiang)
10- Asan’ny Fiangonana
Raharaha (Fiang sy Sekoly)
Rakitra : Hira 787 na hiran’ny Sekoly
Avy amin’ny FOIBE FITONDRAN-TSEKOLY.
Ry Havana malala ao amin’nyTompo .
Ho aminareo rehetra anie ny fahasoavan ‘ i Jesoa Kristy sy ny fitiavan’ Andriamanitra ary ny firaisana amin’ny Fanahy Masina .Amena.
Miarahaba antsika rehetra indrindra ny fianakaviamben’ny Sekoly FJKM rehetra eto Madagasikara nahatratra izao Alahady natokana hitondrana am-bavaka sy ho fanohanana ny Sekoly izao. Ary misaotra ny Prezidà Synodaly , ny Mpitandrina rehetra , ianareo biraon’ny Fiangonana , ny Fiangonana manontolo manokana izao fotoana ho an’ny Sekoly FJKM manomboka hatraty amin’ny Foibe Fitondrantsekoly , ny FPMP , ny Sekoly tsirairay.
Ny Sekoly FJKM dia endriky ny fijoroana vavolombelona ataon’ny Fiangonana . Izany no nahatonga ny teny Fanevan’ny Sekoly manao hoe: « Ary ianareo dia vavolombelona manambara » Jao 15.27a
Koa manentana antsika FJKM rehetra mba hitodika amin’ireo Sekolintsika ary hatoky azy ireny mba ho fijoroantsika ho vavlombelon’iJesoa risty Tompontsika .
Misaotra ny Talem-paritra , ireo Talen-tSekoly ary ireo Mpampianatra sy ny mpiara-miasa rehetra ao aminn’y Sekoly FJKM noho ieo ezaka lehibe nataonareo hampandrosoana ny Sekoly na dia ao anatin ‘ny fahasarotana aza . Hoy ny Tompo : « Fa naharitra amin’ny fanahy iray ianareo ma mray ho hiara-miezaka hampandroso ny fonoana ny Filazantsara » Fil 1.27b
1-Mandalo fotoan-tsarotra isika ankehitriny noho izao Covid-19 izao . Manoloana izany dia mampahery ny Sekoly FJKM rehetra , ireo Talen-tSekoly , ireo Mpampianatra. Mahereza mivavaka fa momba antsika hatrany Andriamanitra .
2-Mikorontana avokoa ny fandaharam-pianarana rehetra ary misy aza ireo voatery nofoanana toy ny Andron’ny Sekoly. Ny fanadinana andrana dia samy hanao izay tandrifiny . Ny fanadinam-panjakana kosa dia miandry ny fandaminan’ny fanjakana isika .
3-Aoka mba hampahafantatra ireo Ray amandreny ny zava-misy ao amin’ny Sekoly ny Talen-tSekoly ka handray fanapahankevitra iombonana eo amin’ny saram-panarana.
Farany , ry Havana ,mahereza ao amin’ny Tompo isika rehetra ary hifampivavaka mandrakariva.
Hitahy anareo anie ny Tompo . “ mba hofenoina ny fahalalana tsara ny sitrapony ianareo amin’ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina rehetra avy amin’ny Fanahy ; mba handehananareo miendrika ny Tompo , hanaovana ny sitrapony amin’ny zavatra rehetra, dia mahavokatra amin’ny asa tsara rehetra sady mitombo aminn’y fahalalana tsara an’Andriamanitra” (Kol 1.9-10)
Ny Tonian’ny Departemantan’ny Sekoly FJKM
Alahadin’ny Sekoly FJKM 2022
Andron’ ny Sekoly 2022
Sekoly FJKM Fambolen-kazo